Finland oo Xireysa Xaduudeheeda soona saartay Xayiraado dheeri ah Dadka u safraya Dalkeeda Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka FinlandFinland oo Xireysa Xaduudeheeda soona saartay Xayiraado dheeri ah Dadka u safraya Dalkeeda
Finland oo Xireysa Xaduudeheeda soona saartay Xayiraado dheeri ah Dadka u safraya Dalkeeda
January 27, 2021 Wararka Finland, Wararka Maanta Somaliska 0
Dowladda Finland waxay ku dhawaaqday hirgelinta xayiraado cusub oo laga soo rogay waddanka saqdii dhexe ee xalay. Xayiraadaha waxaa ka mid ah kuwa ka imanaya dibadda, maadaama mas’uuliyiinta aysan oggolaan doonin in laga gudbo xuduudaha marka laga reebo kiisaska lagama maarmaanka ah. Qof kasta oo loo ogolaado inuu soo galo waxaa laga doonayaa inuu sameeyo tijaabada corona. Sida maanta laga soo xigtay TT.
Masuuliyiinta Finland waxay sheegeen inay ogolaan doonaan Safarada shaqada ee Iswiidhan iyo Norway shaqooyinka muhiimka u ah bulshada qaarkood. Waxay sidoo kale u oggolaan kartaa gelitaanka dadka sababo qoys oo deg deg ah.
Dowladdu waxay qaadatay go’aanka ah in la xiro xuduudaha cabsi laga qabo faafitaanka noocyo cusub oo aad u faafa oo ah Coronavirus.
Wasiirka daryeelka, Krista Kiro, waxay u aragtay soohdinta dhulka ee Sweden “caqabad gaar ah”, iyadoo xustay heerarka sare ee infekshanka ee gobolka xadka ee Haparanda.
Xayiraadaha saaran taraafikada xuduudaha ayaa dhaqan galaya illaa 25-ka Febraay